Degso VPN Unlimited loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (49.00 MB)
Degso VPN Unlimited,
Keepsolid VPN Unlimited waa adeeg VPN ah oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay galaan boggaga la xanibay oo ay ku dhex baaraan internetka si qarsoodi ah. Waad dhex mari kartaa internetka si xur ah adigoo uga mahadcelinaya barnaamijka aad u heli karto adigoo soo dejinaya VPN.
Sida loo rakibo VPN Unlimited?
Thanks to VPN Unlimited, oo aad u isticmaali karto inaad ka gudubto caqabadaha internetka ee ku badan dalkeena iyo marin u helka baraha la mamnuucay, taraafikadaada internetka waxaa lagu hagaajiyaa kombuyuutar kale oo dibedda ah. Adoo dhahaya soo dejiso VPN, waxaad si xor ah u dhex mari kartaa internetka sidii aad ugu xirmi laheyd internetka meel juqraafi ahaan ka duwan.
VPN Unlimited sidoo kale waxay siisaa dadka isticmaala fursad ay ku hubiyaan nabadgelyadooda macluumaadka shaqsiyadeed. Cinwaankaaga dhabta ah ee IP-ga lama socon karo websaydhada maxaa yeelay codsigu wuxuu ku hagaajinayaa is-weydaarsigaaga xogta cinwaankaaga dhabta ah ee IP kombuyuutar kale. Sidan oo kale, waxaan ku dhex mari karnaa anaga oo aan is aqoonsan, kana ilaalinayna xatooyada aqoonsiga.
Sidee loo Isticmaalaa VPN Unlimited?
VPN Unlimited waa fududahay in la isticmaalo. Ka dib markii la abuuro xisaab ah tallaabada ugu horreysa si loo isticmaalo barnaamijka, interface-ka saaxirku wuxuu kugu hagayaa adiga talaabo talaabo ah. Barnaamijku wuxuu sameyn karaa hababka ku habboon ee VPN hal guji, oo waa inaad kaliya ka doorataa adeegaha goob juquraafi ahaan ka duwan si aad ugu xirto internetka. Waxay ka mid tahay barnaamijyada loo isticmaali karo beddel ahaan Hotspot Shield VPN iyo Zenmate oo leh muuqaalkan si sahlan loo isticmaalo ee ay bixiso.
VPN Unlimited Noocyada
Cabirka Faylka: 49.00 MB
Horumar: Simplex Solutions Inc